Na-agagharị na San Marino | Akụkọ Njem
Na-agagharị na San Marino
Mariela Carril | | Ihe ị ga-ahụ, San Marino
Ọ bụrụ na enwere obere mba na mbara ụwa, otu n'ime ha bụ San Marino, mba ochie kacha ochie n’ụwa. Ọ dị na Europe, nke dị n'Italytali ma dị ezigbo nso, yabụ, ka ị na-ejegharị ebe ahụ, ị ​​nwere ike ịbịaru nso ịmara ya.
Ọ ga-abụrịrị ihe iju anya ịmara ihe niile agbata obi gị mana ndị mmadụ na-ekwu na ọ bụ ihe dị na San Marino. Ndi echiche nke ụkwụ na a obere Republic na o nweghi otu mana regents abuo ma o furu obere ka Vatican ma obu Monaco? You ga-ahụ nke ahụ ee ... Chọpụta na-agagharị na San Marino!
2 Ebe nkiri ndị njem nlegharị anya na San Marino
3 Ozi bara uru maka ileta San Marino
Ọ bụ gbasaa Italy na odida obodo mara ugwu, nke na-enwe ihu igwe oge ọkọchị na udu mmiri dị oke oyi. Bụ naanị kilomita iri site na Oké Osimiri Adriatic mara mma ma ọ nweghị ụzọ ọ pụrụ isi erute n'oké osimiri.
Ọ bụghị akụkụ nke European Union mana mkpụrụ ego ahụ bụ euro, na iji aka gị chepụta. Mba nwere a nkezi ọnụ ọgụgụ nke 30 puku mmadụ a na-asụkwa Italiantalian. Dị ka o kwesịrị ịdị, n'ihi ọnọdụ ya, mmetụta Italiantali na-apụta ìhè. Ọ dị na etiti andtali ma ị ga-aga n'okporo ụzọ, ụgbọ elu ma ọ bụ ụgbọ oloko. Gbọ oloko si Rimini ọnụ na si dị iche iche Italian ọdụ ụgbọelu i nwere ike ijide a ụgbọ elu.
Ebe nkiri ndị njem nlegharị anya na San Marino
Ekwesịrị ikwu na ókèala San Marino O mebere obodo itolu itoolu, nke ochie akpụrụ castelli. Castelli ọ bụla na-enye nke ya, yabụ anyị ga-amalite site na castelli nke San Marino, isi obodo n'onwe ya.
Akụkọ mgbe ochie na-ekwu na San Marino bụ onye nsọ Marino guzobere ya bụ onye gbabara n'ugwu Titano na 301 AD Taa na isi obodo enwere ụlọ ochie nke bara uru dị ukwuu n'akụkọ ihe mere eme, ụfọdụ ghọrọ ụkpụrụ ihe owuwu ụlọ ma ọ bụ ebe ndebe ihe mgbe ochie. Obi bu Piazza della Liberta n'ókè nke Obí delle Poste site na narị afọ nke XNUMX, Palacelọ Ọha na Archpriest nke, ọ bụ ezie na e wuru ha na njedebe nke narị afọ nke XNUMX, nwere ọdịdị oge ochie.
N'etiti square ka Ihe akpụrụ akpụ nke nnwere onwe E wuru ya na 1896. Iguzo na square ị ga-enwe ọmarịcha echiche n'ihi na na mgbakwunye na ụlọ ndị dị n'akụkụ nke ọzọ ị nwere ugwu ugwu mara mma. Site na mgbe ochie enwere ụfọdụ ike. Nkata bu nke kacha elu n’ime ato ato nke guzoro ma wuo ya na XNUMXth century. N'ime ebe a ị nwere ike ịga leta Ebe ngosi ihe mgbe ochie nke ngwa agha.
E nwekwara Guaita, nke dị ntakịrị karịa, site na narị afọ nke XNUMX ma nwee mgbidi ndị siri ike. N'ikpeazụ enwere Montale nke sitere na narị afọ nke iri na atọ na n'ime nke ị nwere ike ịhụ ụlọ mkpọrọ ochie. Ha atọ bụ akụkụ nke usoro nchekwa San Marino. Herebụ ebe a, ị gaghị echefu ya Nginggbanwe ndị nche na Obí nke Republicnke a na - eme site na June 17 ruo Septemba 17 (emechaala), kwa ụbọchị ọtụtụ ugboro n'ụbọchị.
Ndụmọdụ m bụ ka ị banye San Marino panoramic ụgbọ oloko. Njem a were nkeji iri anọ ma mee ka ị mara ebe ị na-agaghị enwe ike ịga naanị gị. Na mgbakwunye, a na-esonyere ya na ntuziaka ndu ọdịyo ma yabụ ị mụtara akụkọ ihe mere eme nke mba ahụ mgbe ị na-enwe ekele maka echiche magburu onwe ya nke Borgo Maggiore, Monte Titano, gafere ọwara dị n'etiti ugwu na ije. Traingbọ oloko a bidoro na Julaị 40 rue Septemba 1 ma pụọ ​​na Piazzale Calcigni na 30 elekere. Ọ na-efu 5 euro kwa okenye.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ije ije, ị nwere ike ịgbaso ụzọ nke Costa dell'Arnella. Ọ bụ a enchanting ije ije na-ejikọ San Marino na Borgo Maggiore gbagoro n’ugwu. E nwere mkpọmkpọ ebe nke oge ochie na nnukwu echiche ma ị rute etiti akụkọ ihe mere eme nke Borgo site n'ọnụ ụzọ ochie nke Porta della Rupe.
na Castello Montegiardino enwere nnukwu ụlọ mara mma, akwadoro ka ị gaa. Ejikọtara nnukwu ụlọ a na ọkara nke abụọ nke XNUMXth narị afọ ma nwee Lombard ma ọ bụ ọbụna mmalite ochie. O nwekwara ụka nke narị afọ nke XNUMX na-echekwa ebe ịchụàjà nke narị afọ nke XNUMX. Florentine Ọ bụ aha ọzọ nke ụlọ San Sanarin. Obi ya bụ ebe ewusiri ike ochie a na-akpọ Malatesta ma tinye ya na steeti na narị afọ nke XNUMX.
Eziokwu bụ na ikwu okwu banyere ihe mgbe ochie bụ ebe na-adọrọ mmasị n'ihi na ọ bụ ụzọ dị mkpa gafere n'okirikiri mpaghara. Chiesanuova Ọ nwekwara a ochie obi na-lekwasị ke ebe e wusiri ike, na Castle nke Busignano. Echiche Alps bụ ihe n fromomi site n'ịdị elu ya.
Aquaviva Ọ na - ewepụta aha ya site na mmiri mmiri sitere na nkume nke nnukwu ụlọ a. Taa, obodo a bụ ebe kachasị mma n'ihi na iru mmiri na-eme ka ala ya na ahịhịa ndụ. Nwere ike ịga, dịka ọmụmaatụ, na Monte Cerreto Natural Park nke na-enye ọtụtụ ọrụ eme n'èzí.
Domagnano Amuru ya dika obodo pere mpe na narị afọ nke iri na anọ na ebe ewusiri ike, Montelupo, jikọtara ya na mpaghara San Marino na 1463, n'otu otu mgbakwunye agbakwunyere Fiorentino na Montegiardino. Ihe ngosi sitere na nnukwu ụlọ mara mma n’ihi na ị nwere ike ịhụ oke osimiri dị nso na Ugwu Titano.
PhaetanoDị ka castelli gara aga, ọ bụ nke Malatestas nke Rimini nwe ya ka ọ bụrụ nke ya ruo mgbe mmeri ahụ na mgbakwunye ya. Ebe akụkọ ihe mere eme ya mara mma na Casa del Castello na chọọchị ochie ya. Enwere ọdọ maka ụgbọ mmiri, Osimiri Marano, na nnukwu echiche. Ọzọ castelli bụ Onyekwere, otu agadi ahịa obodo na e hiwere na 1244. Ọ nwere ọnụ ọgụgụ dị nta nke ụka, warara n'okporo ámá na ihe ncheta ya UNESCO enyela ya ihe nrite World Heritage.
Ihe kachasị mma bụ iwere ụdọ n'okporo ụzọ akụkọ ihe mere eme nke isi obodo si ebe a were foto kachasị mma site na elu. SerravalleN'aka nke ọzọ, ọ dịkarịrị afọ, o doro anya na ọ bụ site na narị afọ nke XNUMX. Ọ na-abụbu obodo dị mkpa ma nwekwaa obere okporo ámá na nnukwu ụlọ ochie nke kwesịrị ịga leta.
Ozi bara uru maka ileta San Marino
Luckily e nweghị usoro iji kpuchie oke onye ọ bụla nwere ike ịbanye n’ Italytali nwere ike ịbanye na San Marino. Obere ala a na-arụsi ọrụ ike n'afọ niile mana ọ bụ n'ezie ndaeyo bụ oge kachasị mma n’ime oge niile ịga njem ya ma nwee obi uto n'ihi na ala ya di ebube. E nwere oke ọhịa ndị nwere ụzọ ụkwụ na njem ezinụlọ, ị nwere ike ịrịgo, furu efu n'ọgba ma ọ bụ jiri ụlọikwuu ahụ hie ụra n'èzí.
San Marino na-enye anyị ndị ọbịa WIFI n'efu. Ọ nwere netwọọdụ WiFi yana ngwa nke ya iji nweta ozi na ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » San Marino » Na-agagharị na San Marino
Ihe ị ga - eme n'efu na obodo Lisbon
Ndị a bụ ụfọdụ ụgbọ elu ndị ụlọ ọrụ Ryanair kagburu